Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်)
Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Dextromethorphanအား လေပြွန်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော (ဥပမာ – Sinusitis, အအေးမိခြင်း) ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းအားခဏတာသက်သာစေရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ Dextromethorphanအားချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ် နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (ဥပမာ – နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ emphysema) တို့ကြောင့်ဖြစ်သောတောက်လျှောက်ချောင်းဆိုးခြင်းများအတွက် ဆရာဝန်မှမညွှန်ကြားလျှင် မသုံးရပါ။ Dextromethorphanတွင် Dextromethorphan ပါဝင်၏။ ၎င်းသည် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးဖြစ်ပြီးချောင်းဆိုးလိုစိတ်အားလျော့ချပေးပါသည်။
အအေးမိချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများသည် အသက် ၆ နှစ်အောက်တွင် စိတ်ချရမှုရှိမရှိသက်သေမပြရသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အသက် ၆ နှစ်အောက် ကလေးများတွင် အအေးမိသက်သာစေရန်အတွက် ဆရာဝန်မှ မညွှန်ကြားပဲDextromethorphanကို မသုံးရပါ။ တစ်ချို့ထုတ်ကုန်များ (ဥပမာဆေးအာနိသင်ကြာရှည်သောဆေးများ) အားအသက် ၁၂ နှစ်အောက်ငယ်သောကလေးများတွင် မသုံးရပါ။ ထုတ်ကုန်နှင့်ပါတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဒီထုတ်ကုန်များသည် အအေးမိခြင်းအားကုသမပေးနိုင်ပါ။ ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလဲ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျော့ချနိုင်ရန်အတွက် ဆေးပမာဏကိုသေချာလိုက်နာပါ။ Dextromethorphanအားကလေးအိပ်စေရန်အတွက် မသုံးရပါ။ အအေးမိချောင်းဆိုးဆေးများကိုဒီဆေးနှင့်တွဲမသုံးပါနှင့် (ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများတွင်ကြည့်ပါ) အအေးမိခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းသက်သာစေရန် တခြားနည်းလမ်းများကို ဆရာဝန်အားမေးပါ။ (အရည်များများသောက်ခြင်း၊ စလိုင်းအား နှာခေါင်းထဲသို့ အစက်ချခြင်း၊ humidifier သုံးခြင်း)
Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Dextromethorphanအားသင်၏ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ၄ နာရီမှ ၁၂ နာရီခြားပြီးသောက်နိုင်ပါသည်။ အစာအိမ်နာခြင်း ဖြစ်ပါကအစာသို့မဟုတ် နွားနို့နှင့်ရောသောက်ပါ။ ဆေးအရည်ပုံစံဖြင့် သောက်သုံးမည်ဆိုပါကဆေးချိန်သည့်ပစ္စည်းကိုသေချာသုံးပါ။ အိမ်သုံးဇွန်းအားဆေးချိန်ရန်မသုံးရပါ။ ဆေးပမာဏမမှန်နိုင်ပါ။ suspension ကိုသုံးမည်ဆိုပါကဆေးမချိန်ခင် သေချာလှုပ်ခါပေးပါ။ ဆေးပမာဏသည် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား၊ သင်၏အသက်အရွယ်၊ ရောဂါအခြေအနေနှင့် ကုသမှုအားတုန့်ပြန်မှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ Dextromethorphanအားကိုယ့်သဘောနှင့်သုံးမည်ဆိုပါကဆေးဗူးတွင်ပါသောညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ခါ သင့်အသက်ရွယ်နှင့်ကိုက်ညီမည့် ဆေးပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ။ ဆရာဝန်မှ Dextromethorphanသောက်ရန်ညွှန်ကြားလျှင် အာနိသင်ကောင်းစေရန် မှန်မှန်သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ဖို့ မှတ်မိနေစေရန်အတွက် နေ့စဉ်တူညီသောအချိန်မှာသာသောက်ပါ။
Dextromethorphanအားမသင့်လျော်စွာအသုံးပြုပါက ပြင်းထန်သည့် အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ – ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ သေခြင်း) ဆေးပမာတိုးခြင်း၊ အကြိမ်ရေပိုသောက်ခြင်းသို့မဟုတ် ညွှန်ကြားသည်ထက် အချိန်ပိုကြာအောင် သောက်ခြင်းမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။ ညွှန်ကြားမှသာဆေးကိုရပ်ပါ။
လက္ခဏာများသည် တစ်ပတ်ထက်ပိုကြာနေပါကသို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာပါကသို့မဟုတ် သင့်၌ အဖျားဝင်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အကွက်ထခြင်းများဖြစ်လာလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ ဒီလက္ခဏာများသည် ပြင်းထန်သည့်အခြေအနေများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Dextromethorphanကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့်စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့်ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန်Dextromethorphanကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Dextromethorphanဆေးအမျိုးအစားနှင့်ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Dextromethorphanအား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Dextromethorphanမသောက်ခင် သင့်၌ Dextromethorphanသို့မဟုတ် တခြားဆေးများသို့မဟုတ် သင်သုံးမည့်ထုတ်ကုန်တွင်ပါဝင်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အားပြောပါ။ ဆေးဗူးခွံတွင်ပါသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
Monoamine Oxidase (MAO) inhibitor များဥပမာ -isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), and tranylcypromine (Parnate) များသုံးနေလျှင် သို့မဟုတ် ၂ ပတ်အတွက် အသုံးရပ်ထားလျှင် Dextromethorphanအားမသုံးပါနှင့်။
ညွှန်ကြားထားသည့်ဆေး၊ မညွှန်ပဲသောက်နေသည့်ဆေးများ၊ ဗီတာမင်များ၊ အာဟာရ ဖြည့်စွက်စာများနှင့် အပင်ထွက် ပရဆေးများကိုသောက်နေလျှင် သို့မဟုတ် သောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလျှင် ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုပြောပါ။
ဆေးလိပ်သောက်လျှင် သို့မဟုတ် သလိပ်အများကြီးထွက်ပြီးချောင်းဆိုးလျှင် သို့မဟုတ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများပန်းနာရင်ကြပ်၊ emphysema သို့ နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ခြင်းများရှိနေလျှင် သို့ ရှိခဲ့ဖူးလျှင် ဆရာဝန်အားပြောပါ။
သင့်၌ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နို့တိုက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလျှင် Dextromethorphanသုံးနေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရလာလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
phenylketonuria (PKU – စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖွံ့ဖြိုးမှုအားကာကွယ်ရန်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသောအစားအသောက်အားစားသောက်ရမည့် မျိုးရိုးလိုက်သောရောဂါ) ရှိနေလျှင် တစ်ချို့ဝါးစား၍ရနိုင်သည့်ဆေးပြားများတွင် dextromethorphanအားချိုသောအရသာရှိစေရန် aspartame များကိုထည့်ထားနိုင်ပြီး phenylalanine ပါလာနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပြင်းထန်သည့် ဓါတ်မတည့်မှု (အကွက်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ ပါးစပ် မျက်နျာ နှုတ်ခမ်း လျှာ လည်ချောင်းတို့တွင် ဖူးယောင်ခြင်းများရှိလာလျှင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူပါ။ အောက်ပါပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပါကdextromethorphanအားရပ်ပြီး ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းခေါ်ပါ။
• ပြင်းထန်သောခေါင်းမူးခြင်း၊ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းသို့ စိတ်အလွန်လှုပ်ရှားခြင်း
• ကယောက်ကတမ်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း
• မပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာဗိုက်နာခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအားခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
dextromethorphanသည်သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသောဆေးဝါးများနှင့်ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီးဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန်သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။)
ဤဆေးအားအောက်ပါဆေးများနှင့် တွဲမသုံးရပါ။ သင်၏ဆရာဝန်မှ အောက်ပါဆေးများနှင့်တွဲမကုရန် သို့မဟုတ် သင်သောက်နေသည့်ဆေးများကိုပြောင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။
ဤဆေးအားအောက်ပါဆေးများနှင့် တွဲမသုံးရပါ။ သို့သော် တစ်ချို့ရောဂါများတွင် တွဲရနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်ခုလုံးတွဲသုံးရန်ညွှန်ပါကသင်၏ဆရာဝန်သည် ဆေးပမာဏသို့ သောက်ရမည်အချိန်တို့ကိုပြောင်းလဲပါလိမ့်မည်။
ဤဆေးနှင့် အောက်ပါဆေးများကိုတွဲသုံးလျှင် တစ်ချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပိုဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သောဆေးနှစ်ခုတွဲသုံးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးကုသမှုလဲ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်ခုလုံးတွဲသုံးရန်ညွှန်ပါကသင်၏ဆရာဝန်သည် ဆေးပမာဏသို့ သောက်ရမည်အချိန်တို့ကိုပြောင်းလဲပါလိမ့်မည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Dextromethorphanက အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dextromethorphanသည်သင်၏နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီး၏။ အထူးသဖြင့်
• ပန်းနာရင်ကြပ် – Dextromethorphanသည် ချောင်းဆိုးခြင်းကိုလျော့ကျစေသောကြောင့် ပန်းနာရင်ကြပ်နေစဉ် အဆုတ်နှင့်လေပြွန်အတွင်းရှိသလိပ်များကိုဟပ်ထုတ်ရန် ခက်ခဲစေပါသည်။
• ဆီးချို – တစ်ချို့ထုတ်ကုန်များတွင် သကြားပါတတ်ပြီးသွေးတွင်းသကြားဓါတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းအားသက်ရောက်စေနိုင်ပါသည်။
• အသည်းရောဂါ – Dextromethorphan ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းစုပုံလာနိုင်ပြီးမလိုလာအပ်သည့်အာနိသင်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
• နာတာရှည် လေပြွှန်ရောင်ခြင်း emphysema
• ချောင်းဆိုးသလိပ်ပါခြင်း – Dextromethorphanသည် ချောင်းဆိုးချင်စိတ်အားဖိနှိပ်သောကြောင့် အချို့ရောဂါများတွင် အဆုတ်နှင့်လေပြွန်အတွင်းသလိပ်များစုပုံလာနိုင်ပါသည်။
• အသက်ရှူနှေးခြင်း – Dextromethorphanအသက်ရှူနှုန်းအားပိုနှေးစေပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက် လူကြီးသောက်ရန် ပုံမှန်ပမာဏ
ဆေးတောင့်၊အရည်၊ ဆေးပြား၊ အစက်ချဆေးရည်: 10 to 30 mg orally every4to 8 hours.
ငုံဆေးပြား။ ။3lozenges (10 mg each) orally every6to 8 hours.
လျှာပေါ်ပျော်ဝင်ဖလင်ပြား: 15 to 30 mg orally every6to 8 hours.
အများဆုံးဆေးပမာဏ ။ ။ 120 mg/day.
ကလေးတွေအတွက် Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက် ကလေးသောက်ရန် ပုံမှန်ပမာဏ
၁ လမှ ၃လ: 0.5 to 1 mg orally every6to 8 hours.
၄ မှ ၆ လ: 1 to2mg orally every6to 8 hours
၇ လမှ ၁နှစ် :2to4mg orally every6to 8 hours
၂ မှ ၆ နှစ်:
ဆေးရည်, ငုံဆေး, ဆေးပြား, အစက်ချဆေးရည်: 2.5 to 7.5 mg orally every4to 8 hours.
5 mg/5 mL သောက်ဆေးရည်:5mL orally every4hours. Not more than4doses in 24 hours.
အများဆုံးဆေးပမာဏ: 30 mg/day.
၇ မှ ၁၂ နှစ်:
ပျော်ဝင်ဆေးဖလင်ပြား: dissolve2strips on tongue every6to 8 hours.
ဆေးရည်, ငုံဆေး, ဆေးပြား,အစက်ချဆေးရည်:5to 10 mg orally every4hours or 15 mg every6to 8 hours.
အများဆုံးဆေးပမာဏ: 60 mg/day.
ဆေးတောင့်, ဆေးရည်, ငုံဆေး, ဆေးပြား, အစက်ချဆေးရည်: 10 to 30 mg orally every4to 8 hours.
လျှာပေါ်ပျော်ဝင်ဖလင်ဆေးပြား: 15 to 30 mg orally every6to 8 hours.
အများဆုံးဆေးပမာဏ: 120 mg/day.
Dextromethorphan (ဒက်စ်ထရိုမီသိုဖန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
• Buckleys Cough
• Diabetes CF
• ElixSure Cough
• Father John’s Medicine
• Hold DM
• Little Colds Cough Formula
• Long-Acting Cough Suppressant
• Pediacare Children’s Long-Acting
• Robafen Cough
• Robitussin Children’s Cough LA
• Robitussin Cough Gels
• Robitussin Maximum Strength
• Silphen DM
• Simply Cough
• St. Joseph Cough Suppressant
• Sucrets DM
• Sucrets DM Cough
• Triaminic Long Acting Cough
• Tussin Cough
• Vick’s DayQuil
• Vick’s Formula 44 Cough Relief